I-Botnet ifake iComputer yakho iComputer? - Semalt
U-Oliver King, u-8 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi izifo ze-botnet zixhaphake phakathi kweekhompyutha, ngokukhethekileyo eChina nase-United States. Nangona ezinye iibhenets zinamaqela ambalwa kuphela, ezinye ziyakwazi ukufikelela kwizigidi zoomatshini behlabathi. I-Botnets inenjongo yokukhohlisa abasebenzisi ukukhuphela iinkqubo ezinokukrokra okanye ii-virus kwaye zibanyanzele ukuba zicofe iqhosha elisebenzisanayo okanye iividiyo ezingenakho ukusuleleka nge-malware eyingozi. Isebenza njengeholide yeTrojan kwaye ivumela abacebisi ukuba bafikelele kwiinkcukacha zakho kunye nolwazi lwabucala - scaldavivande catering menus. Abagxeki basebenzisa ikhompyutheni yakho yokwenza imisebenzi eyahlukeneyo kunye nokuphambuka kwezobugebengu, ubuqhetseba, kunye nobubi be-intanethi.
Kwezinye iimeko, ikhompyutha yakho okanye ifowuni yeselula inokusulelwa yi-botnet okanye i-malware engakuvumeli ukukhuphela iifayile ezifanelekileyo kwaye ikukhusele ekuvuleni iiwebhusayithi zakho ezizithandayo. I-botnet yinkonzo yeekhomputha ezitheleleke kwi-malware ethile okanye inkqubo enobungozi. Inkqubo ilawulwa ngumntu wesithathu okanye iqumrhu elingaphandle. Makhe ndikuxelele apha ukuba i-master of botnets isebenzisa ikhomputha yakho ukutshintsha ulwazi lwekhadi lesikweletu, thumela ii-imeyli ze-spam, ukuqhubezela ukuhlaselwa kwenkonzo kwiindawo ezahlukeneyo, kwaye wenze ukuhlaselwa kwezinto zokukhahlazela kwinani elikhulu..
Indlela yokufumana ukusuleleka kwe-malware?
Nangona uhlalutya idivayisi yakho nge-anti-virus okanye inkqubo yokulwa ne-malware, kufuneka uqale ukukhusela zonke izifo. Inyani kukuba ininzi yeeprogram ayilungele nto kwaye ayikwazi ukuqhubeka kunye nenani elikhulu lee-hack ne-internet ezisongelo. Ngamanye amaxesha, iikhowudi zezinto ezinobungozi zifakwe kwiwebhusayithi yakho ngaphandle kolwazi lwakho. Ukuba unakho ikhompyutha, kufuneka uhlaziye isiphequluli sakho sewebhu okanye inkqubo yokusebenza rhoqo. Kuhle ukuba ufake iNkqubo yokuSuswa kweNkcazo, kucetyiswa luluninzi lweengcali kumakhasimende abo kwihlabathi lonke. Ukuba ikhomputer yakho yenza umsebenzi wayo ngokukhawuleza, unokuba yixhoba leebhotile, kwaye amathuba kukuba i-credit card yakho iya kubiwa.
Indlela yokuthintela ukuthintela kwe-botnet?
Ngaphandle kokusebenzisa i-antimalware rhoqo kunye neenkqubo ze-antivirus, kufuneka uthathe amanyathelo athile ukuqinisekisa ukukhuseleko lwakho kunye nokukhuselwa kwikhompyutha. Into yokuqala okumele uyenze kukuba ukhethe amagama abasebenzisi abanamandla kunye namaphasiwedi. Qiniseka ukuba uhlolisisa izicwangciso zakho zobumfihlo ngasese imihla ngemihla kwaye ubuyekeze izicwangciso kanye okanye kabini ngeveki. Akufanele ujike iifowuni xa uvula i-intanethi uze ukhangele iiwebhusayithi zakho ezizithandayo. Iingcali zikholelwa ukuba i-botnets inokuchaphazela ikhompyutha eqhelekileyo okanye isiselula kwisithuba esingaphantsi kwemihlanu. Ngaloo ndlela, kufuneka uqaphele ngamaphepha ewebhu kunye neeblogi ozivakatyelayo. Ngethuba usebenzisa i-intanethi, akufanele unqakraze kwiikhonkco ezingaziwa kunye nezikhonkco ze-imeyile, ungalokothi ukhupha isofthiwe kunye ne-apps kwiiwebhusayithi ezingaziwa okanye ezingekho mthethweni, kwaye uhlole i-device yakho rhoqo.